Xawaaladaha lacagaha ee Mobile-ka ayaa laga joojiyay Soomaaliya. Laakiin waxaa jira khataro - Warka gudaha Somaliya - Local News in Somalia
Home WARKA GUDAHA Xawaaladaha lacagaha ee Mobile-ka ayaa laga joojiyay Soomaaliya. Laakiin waxaa jira khataro
Xawaaladaha lacagaha ee Mobile-ka ayaa laga joojiyay Soomaaliya. Laakiin waxaa jira khataro
Warbixintii ugu dambaysay ee Baanka Adduunka ayaa muujisay in Soomaaliya ay leedahay mid ka mid ah suuqyada ugu firfircoon ee suuqa dhaqaale ee adduunka, ka soo kabanaya dalalka kale ee Afrika. Waxa xitaa ka batay adeegsiga lacag caddaan ah oo ku taal waddanka 14 milyan oo qof. Victor Owuor ayaa weydiistay Tim Kelly, khabiir ku takhasusay farsamada wararka iyo isgaarsiinta Baanka Adduunka iyo qoraaga warbixinta, si uu u sharaxo natiijooyinka iyo waxa ay ula jeedaan dalka.
Maxay tahay sababta lacagta mobile-ka ay ugu guulaysatay Soomaaliya?
Lacagaha mobilka ah waxay markii hore ku bilaabatay si sahlan oo ku saabsan deymin waqtiga u dhaxeeya dadka isticmaala. Tobanaan sano ka hor, shirkadaha taleefanada moobiilka ayaa u codeeyay iyagoo adeegsanaya adeegyo lacageed oo mobile ah. Waxaa si dhakhso ah loo dareemayaa hab fudud oo ammaan ah oo ah samaynta macaamilo iyo kaydinta lacagta.
Si ka duwan adeegga macaamiisha ee Mpesa ee caanka ah ee Kenya, wareejinta Soomaaliya ayaa inta badan laga helaa Dollar. Inkastoo shirkadaha bixiya adeegga lacagaha moobaylku ay yihiin kuwa ka shaqeeya shabakadaha mobile, sida Kenya, waxay sii kordhayaan qayb ka mid ah shirkadaha waawayn ee bixiya adeegyada bangiyada iyo lacagaha xawilaadda.
Marka la eego wadarta qiimaha macaamilka, Mpesa ayaa qiyaastii $ 10 milyan bishii iyadoo dhammaan macaamiilyada mobile-ka ee Kenya ay yimaadaan $ 3.17 bilyan bishii. Macaamilka Soomaaliya waxaa lagu qiimeeyaa $ 2.7 bilyan bishii.
Dhowr arrimood ayaa ku dhiirri-galiyay kor u qaadka dhaqaale ee moobaylka:
Dad badan oo Soomaali ah ayaa leh taleefanno gacanta – oo ku saabsan 9 ka mid ah 10 qof oo Soomaali ah, oo ka weyn da’da 16 jir.
Ku dhawaad ​​60% dadka Soomaaliyeed waxay yihiin reer guuraa, ama reer-soomaali ah, oo u guuraya si weyn, si ay u helaan daaq iyo ku filan xoolahooda. Sidaas daraadeed lacagta mobile-ka ayaa ku haboon qaab nololeedkooda, waxaana sidoo kale loo isticmaalaa in lagu fududeeyo ganacsiga.
Waxyaabaha laga walwalsan yahay baaxad aad u sarreeya oo ah lacag been abuur ah, maqnaansho nidaam lacageed, awood, iyo helitaan xadidan adeegyada bangiyada caadiga ah ayaa sidoo kale lacag moobiil ah ku beddelaya beddel wax ku ool ah oo lacag caddaan ah.
Maanta, lacagta moobiilka ayaa sidoo kale fududeyneysa socodka xawaaladaha oo aad u muhiim ah qoysaska Soomaalida intooda badan sababtoo ah fursado la’aan suuqa Soomalida. Ka faa’iideysiga isbeddelkan, shirkadaha xawilaadda ayaa sii kordhaya si wadajir ah ula shaqeeya shirkadaha taleefannada gacanta si ay si toos ah ugu gudbiyaan macaamiisha ‘xisaabaadka lacagaha moobaylka.
Immisa qof ayaa isticmaalaya maxaase badanaa loo isticmaalaa?
Warbixinta sahankeena baaritaanka ayaa soo jeedineysa in qiyaastii 73% dadka soomaaliyeed ee da’doodu ka sarayso 16 jir ay adeegsadaan adeegga lacagaha bilaashka ugu yaraan bishiiba mar – inkastoo intooda badan ay u isticmaalaan dhowr jeer bishii, dadka dakhliga badanna waxay isticmaalaan wax badan oo dheeraad ah. Qiyaastii 155 malyuun oo lacag ah ayaa lagu sameeyaa bil walba.
Waxaa loo isticmaalaa waxyaabo badan oo kala duwan.
Mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa in lagu bixiyo biilasha – iibsiyada inta u dhaxaysa $ 2 iyo $ 300. Lacagta moobaylku waa mid aad u ballaaran oo loo isticmaalo lacagta. Sadex meelood laba meel oo ka mid ah kuwa la daraaseeyay waxay u isticmaalaan inay bixiyaan waxyaabaha sida biyaha, korontada iyo dhuxusha. Dalbashada saddexaad ee loo isticmaalo si ay u iibsadaan raashin, alaab adag iyo xoolo.
Ku dhowaad 40% waxay isticmaalaan lacag mobile lacag si ay u bixiyaan khidmadaha dugsiga ee carruurta. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lacag loogu diro asxaabta iyo qoyska.
Waxaan sidoo kale ogaannay in loo isticmaalo kaydinta.
Xilligan, macaamilada la sameeyey ayaa badanaa bixiya lacagaha qofka, laakiin waxaa jira kor u kaca ganacsiyada. Waxaan aragnay in helitaanka mushaarka lacageed lacageed lacageed uu leeyahay, tusaale ahaan, wuxuu ahaa arrin muhiim ah oo dhiirigelinaya kor u qaadista.
Maxay yihiin faa’iidooyinka iyo khatarta koritaankani?
Soomaaliya waxaa ka maqan nidaam bangi oo rasmi ah. Kaliya 15% dadweynaha waxay leeyihiin koonto bangi. Lacagta moobaylku waxay gacan ka gaysatay balaarinta maaliyadeed.
Kooxaha nugul, waa hab sahlan oo dhakhso leh si dhaqso loogu helo lacagta. Iyo sababta oo ah waxaa loo eegaa sida ugu dhakhsaha badan ugana halis badan waraaqaha lacag bixinta, hay’adaha gargaarka badan ayaa u adeegsada si ay u gaaraan tuulooyinka fogfog.
Maadaama dukaamada intooda badani ay aqbalaan lacagta mobile, waxay sidoo kale bixisaa ka-faa’iideystayaal badan oo dabacsan, waxayna ka fogaaneysaa baahida loo qabo in la safro, taas oo hoos u dhigaysa khatarta dhacdooyinka ammaanka.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira khataro badan oo ka jira nidaamka lacagta mobile. Kan ugu weyni waa nidaam la’aan la’aanta nidaamka nidaamka jaban oo kala gedisan.
Waxay sidoo kale u nugul tahay lacagta la dhaqay iyo maalgelinta argagixisanimada. Tani waa sababta oo ah waxaa jira daciif “macmiilkaaga” u hoggaansamida, waafaqsan heerarka caalamiga ah ee bangiyada, taas oo micnaheedu yahay dhowr kaararka SIM-ka iyo xisaabaadka lacagaha moobaylka ayaa la diiwaangeliyaa iyadoo la adeegsanayo aqoonsi sax ah. Ugu dambeyntii, tani waxay keentay xisaabtan xadidan iyo xakameyn.
Khatar kale waa xaqiiqda ah inaysan jirin wax hubin ah in lacagtaas mar walba la heli karo, maadaama ay ku jiri lahaayeen xisaab bangi caadi ah. Sababtoo ah ma jiraan wax la isku hubo oo u dhaxeeya miisaaniyadaha moobaylka ah ee ay qabtaan moobaylka iyo kuwa lagu hayo xisaabaadka shakhsi ahaaneed iyo ganacsiyada.
Wareejinta Soomaaliya waxaa inta badan laga helaa doolarka Maraykanka, taas oo aan caafimaad u lahayn dhaqaalaha dalka. Tani waa isbeddeleysaa – tusaale ahaan, Somaliland waxay ku waajib tahay in wadaraha ka hooseeya $ 100 lagu sameeyo shilin Soomaaliga.
Wershada ayaa sidoo kale wali si aan cakiraneyn, taas oo macnaheedu yahay in uu ku guuldareysto inuu gacan ka geysto kor u qaadista dakhliga dowladda.
Sidee lacagta mobile-ka ee Soomaaliya uga duwan tahay dalalka kale ee Afrika?
Waxyaabo yar ayaa ka duwan.
Bankiga, isgaarsiinta iyo lacagaha isweydaarsigu si aad ah ayay isugu xiran yihiin, taas oo keentay in ay soo baxaan labo shirkadood oo waawayn, oo ay wadaagaan xidhiidhka ka dhexeeya shirkadda taleefanka gacanta, bangiga iyo hay’adaha xawilaadda. Tani dhab ahaantii maahan arrin meelo ka mid ah Afrika.
Sidoo kale, dadka hawlwadeenada ah waxay qabsadeen qaab ganacsi oo kala duwan, oo ku salaysan dakhliga aan tooska ahayn ee laga soo qaatay adeegyo kale – sida iibinta waqtiga hawada. Sidaas daraadeed, waxay awood u leeyihiin in ay bixiyaan lacagta mobilka ee u dhexeeya dadka isticmaala adeeg “bilaash ah” (iyadoon wax lacag ah laga qaadin ama canshuur). Tani maahan kiis dalal badan oo gobolka ka mid ah.
Qodob kale oo ka duwan waa maqnaansho dheelitir la’aanta xakamaynta sharciyadeed inkastoo xaqiiqda ah in shirkadaha taleefanka gacanta ay xakameynayaan lacago badan oo wareeg ah.
Hawlwadayaashu waxay sidoo kale ku tiirsan yihiin shabakadooda qaybinta, maaha wakiilo dibadeed (sida ay Kenya ku sameeyaan). Tani macnaheedu waa in caymiska uu xadidan yahay.